Akwụkwọ akụkọ kwesịrị iche echiche ... | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 5, 2006 Na Tọzdee, Septemba 5, 2006 Douglas Karr
Site na Seth blog taa gbasara ihe isiokwu na Editor na nkwusa banyere echiche Godin site na Obere bụ New Big na otu esi etinye ha n'ọrụ na Akwụkwọ Akụkọ.
Imirikiti ụlọ ọrụ ndị na-achọ ịkwalite onwe ha ga-eme nyocha SWOT na-atụle onwe ha na asọmpi ha. Nsogbu a bụ na mgbasa ozi 'mpaghara' mere nnukwu ọrụ nke ileghara ịntanetị anya dị ka ihe iyi egwu ogologo oge. Ọ bụghị mgbe akwụkwọ akụkọ nyefere ego ntinye aha na Craig's List na eBay ka ha chọpụtara na ihe a Interweb bụ ebe a ịnọ. Mana ha ga-agbanwe akwara mpaghara ha ma jiri ohere ha nọrọ.
SWOT = (S) ịdị ike, (W) ịdị ike, (O) uru, (T)
E nwere ihe atọ dị mkpa nke akwụkwọ akụkọ nwere banyere asọmpi ịntanetị ya: mgbasa ozi mpaghara, nkesa mpaghara na akụrụngwa mpaghara. You na-ahụ ihe jikọrọ ebe ahụ? Obodo, obodo, obodo !!! Ndị a bụ ihe atọ 3 ga - atụgharịrị na asọmpi asọmpi n'abali! Ejiri m ihe karịrị afọ iri na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ na-eti mkpu site na oke m na anyị kwesịrị iji ike anyị mee ihe iji nwee ohere nke ịbụ onye obodo. Ọ bụ na ntị chiri.
Isi okwu bụ na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ bụ ụlọ ọrụ na-enwe mmekọahụ. Ndị isi ya gụrụ akwụkwọ n'ime ụlọ ọrụ ahụ, ọ na-ahapụkarị ụlọ ọrụ ahụ maka talent. Industrylọ ọrụ ịntanetị, n'aka nke ọzọ, enwetawo talent site n'ọtụtụ ụlọ ọrụ - gụnyere akwụkwọ akụkọ (moi).
Amaghị m na isi ihe bụ na akwụkwọ akụkọ kwesịrị iche obere, ekwenyere m n'ezie na ọ dị ha mkpa iji naanị ọdịiche dị na ha dị ka azụmaahịa mpaghara. Ọzọkwa, echere m na ọ bụ oge ha ga-amalite ile anya n'èzí mgbidi anọ ha iji dọpụta talent. Ndị nke ahụ nọrọ ebe ahụ kemgbe ndụ ha anaghị eme ha ọfụma.
Mee Web 2.0 Logo gị
Mee 1, 2009 na 4: 31 PM
Nke ahụ bụ ezigbo ezigbo isi - a na - agbagha mgbanwe mgbe niile!